Andriamanarivo Paoly Rabe. DadaRabe dia mpanoratra malagasy
ⓘ Andriamanarivo Paoly Rabe. DadaRabe dia mpanoratra malagasy teraka taminny taona 1968 tao Antananarivo. Nianatra teny Ankatso ary nivoaka ho dokotera. Nanohy fi ..
ⓘ Andriamanarivo Paoly Rabe
DadaRabe dia mpanoratra malagasy teraka taminny taona 1968 tao Antananarivo. Nianatra teny Ankatso ary nivoaka ho dokotera. Nanohy fianarana tany Frantsa izy ary nahazo ny mari-pahaizana manokana momba ny "Psychiatrie". Niverina tao Madagasikara izy ny taona 2007 ary mampianatra ao aminny faculté de médecine ao Mahajanga.
1. Ny sanganasany
Manoratra tononkalo aminny teny malagasy no tena ataony. Mpikambana mpanorina ny HAVATSA-UPEM Frantsa.
Namoaka boky tononkalo izy taminny taona 2003: "Dia nisy ny mazava". Misy tononkalo 700 eo ho eo nosoratany.
Wikipedia: Andriamanarivo Paoly Rabe